हरप्रहर डेस्क काठमाडौँ प्रकाशित मिति: २०७९ बैशाख १७, शनिबार (२ हफ्ता अघि)
नेकपा एमाले काठमाडौं क्षेत्र न. ८ ले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. १९ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट चन्द्र मान मुनिकारको नेतृत्वमा वडा सदस्यमा निरब शाही ,सुरेन डंगोल ,लक्ष्मी हिरा शाक्य र तिर्थ देबी पुजारीसहितको उम्मेदवार प्रस्तुत गरेको छ ।
मुनिकारले निर्वाचन जितेर आउनासाथ १९ वडाभित्र रहेका अव्यवस्थित तारहरुको व्यवस्थापन ,वडाको सरसफाईका लागि विशेष योजना ल्याउने, विष्णुमति किनारलाई हरियाली पार्कको रुपमा विकास गर्नुका साथै १९ वडालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, वडाबासीको आधारभूत सेवालाई ध्यान दिने, वडाका विपन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाका साथै जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्ने लगायतका योजना रहेको हरप्रहर डट कमसँगको कुराकानीमा बताए ।
१९ वडा भित्रका मूर्त सम्पदाको पुनर्निर्माण, जिर्णोद्धार साथै अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि गुरुयोजना नै बनाएर अघि बढ्ने पनि मुनिकारले प्रतिबद्धता गरे । उनले कंकेश्वरीको मन्दिरलाई बिश्वसामु चिनाउन व्यवस्थित र विकाश गर्दै विश्व सम्पदामा सूचिकृत गर्ने गुरु योजना रहेको बताए ।
वडाको विकासको लागि आफुसँग छोटो समयमा सम्पन्न गर्ने देखि दीर्घकालीन रुपमा महत्व राख्ने विभिन्न योजनाहरु रहेको मुनिकारको दाबी छ । १९ वडाको संस्कृति, सम्पदा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकासको योजनासहित आफु चुनावी मैदानमा उत्रिएको मुनिकारले बताए ।
नेकपा (एमाले) बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका मुनिकारले बौद्ध धर्मको अघ्ययन र वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामार्फत सामाजिक गतिविधिमा संलग्न छन् भने साहित्य विधामा पुस्तक लेखनमा पनि सक्रिय छन्।